Ahoana ny fampifanarahana ireo hitsin-dàlana fitendry amin'ny iOS 7 sy OS X Mavericks? | Vaovao IPhone
Ahoana ny fampifanarahana ireo hitsin-dàlana fitendry amin'ny iOS 7 sy OS X Mavericks?
IOS vitsivitsy lasa izay, nampidirin'i Apple ny hitsin-dàlana fitendry (miaraka amin'ny kitendry fizarana) ahafahantsika manoratra teny toy ny "xfa" ary mandeha ho azy, ny iOS keyboard dia nanova azy ho "azafady" satria nanana hitsin-dàlana fitendry teo aloha teo amin'ny fikirana izay namadika ilay teny diso tsipelina ho teny feno isika; amin'ity tranga ity, "azafady." Raha manana iDevice miaraka amin'ny iOS 7 sy Mac misy OS X Mavericks isika, dia azontsika atao ny mampifandray ireo hitsin-dàlana fitendry mba tsy hanahaka ireo hitsin-dàlana amin'ny solosainantsika na iDevice. Ho an'ity dia mila mampiasa iCloud amin'ny fitaovana roa isika ankoatra ny fampiatoana ny "Documents and Data".
Fampifanarahana ny hitsin-dàlana fitendry avy amin'ny iOS 7 sy OS X Mavericks
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mampihetsika ny safidy «Antontan-taratasy sy data»Avy amin'ny iCloud.
iOS: Ao amin'ny iDevice anao dia ao amin'ny Settings> iCloud; ilaina ny bokotra eo akaikiny «Antontan-taratasy sy angona» dia navadika.
Solosaina: Midira iCloud (Windows) ary mampihetsika «Antontan-taratasy sy data«. Amin'ny Mac, tsy maintsy miditra ianao System Preferensi> iCloud> »Antontan-taratasy sy angona»
Ary ny zavatra farany tokony hataontsika dia ny famoronana hitsin-dàlana fitendry amin'ny iOS sy OS X Mavericks.
iOS: Mandeha amin'ny Settings izahay ary avy eo manindry Kitendry. Rehefa tafiditra ao anatiny dia mitady ilay fitaovana Function Quick ary tsindrio eo amin'ny «Mamorona hitsin-dalana«. Hiseho ny endrika iray izay tsy maintsy ampidirintsika ilay andianteny izay hotendrena ho azy rehefa manoratra ny hitsin-dàlana fitendry. Amin'ity tranga ity, rehefa manoratra «actipad«, Hiditra ho azy ny vondron-teny Vaovao IPad.
Mac: Toy izany koa no idirantsika ny OS X Mavericks System Préférences ary ao amin'ny motera fikarohana no ampidirantsika ny teny «ny SMS»Ary avy eo, kitiho ny«Ohatra»Misy mamirapiratra. Eo amin'ny farany ambany dia tsindrio ny «+»Ary ampahafantarinay ny sisin-dalana amin'ny lafiny iray sy amin'ny lafiny iray, izay fehezanteny tsy maintsy soratana ho azy rehefa tafiditra ny hitsin-dàlana: fampiharana sy fampiharana (raha izany dia).
Misaotra an'i iCloud, ny hitsin-dàlana dia hampifangaroina ary hanana ny an'ny iOS ao amin'ny OS X sy ny mifamadika amin'izany.
Fanazavana fanampiny - Kitendry hitsin-dàlana ho an'ny iPhone sy iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ahoana ny fampifanarahana ireo hitsin-dàlana fitendry amin'ny iOS 7 sy OS X Mavericks?
Snooperscope, fahitana amin'ny alina ho an'ny iPhone
Kitendry hitsin-dàlana ao amin'ny iOS 7